Soo ogow waxa lagu arko magaalada Welsh ee Cardiff | Bezzia
Maxaa lagu arkaa magaalada Wales ee Cardiff
Susana Garcia | 31/03/2021 10:00 | nololeedka, safarka
La Magaalada Welsh ee Cardiff waxay leedahay xarun taariikhi ah laakiin sidoo kale laga soo qaaday aag casri ah. Waa caasimada Wales iyo magaalo yar, oo lagu soo booqan karo lug iyo waqti yarba, taasoo ka dhigaysa joogsi weyn dhawr maalmood. Qalcadda ugu horreysa ee aaggan waxay ka bilaabmaysaa xilliyadii Roomaanka illaa maantana weli waxay ilaalisaa qalcaddeeda cajiibka ah, taas oo ah mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan uguna muhiimsan.
Tani Magaaladu waxay leedahay aag deked leh, taasoo ka dhigtay meel aad u firfircoon. Intaas waxaa sii dheer, Intii lagu gudajiray Kacaankii Warshadaha wax badan ayey soo kordheen, maadaama ay noqotay marinka ugu weyn ee dhuxusha Ingiriiska, meel muhiim ah. Maanta waa magaalo u heellan dalxiiska oo na siisa meelo badan oo aan ku aragno.
1 Qalcaddii Cardiff
2 Xarunta dawladda hoose ee Cardiff
3 Matxafka Qaranka Cardiff
5 Arcade Royal
6 Suuqa Dhexe ee Cardiff Victoria
Tani waa barta ugu muhiimsan ee lagu arko magaalada Cardiff. Qalcaddu waxay leedahay asal ahaan Norman, in kasta oo dib loo dayactiray waqti ka dib. Inta badan dayactirka waxaa sabab u ah kuwii la qabtay qarnigii XNUMX-aad, markaa waad arki kartaa qaab gaar ah oo laydh ah. Qasrigu wuxuu ku fadhiyaa buur yar oo wuxuu bixiyaa booqasho wacan, oo leh hageyaal maqal ah Waa suurtagal in la arko rinjiyeynta fresco, qaabab alwaax ah iyo qolal kala duwan oo naga yaabin doona isku-darka. Intaas waxaa sii dheer, waxaad kori kartaa Tower-ka saacadda si aad ugu raaxaysato aragtida.
Xarunta dawladda hoose ee Cardiff
Golaha magaalada waa a dhisme weyn oo soo jiita dareenka, horaantii qarnigii XNUMXaad. Waa suurtagal in la booqdo qolalka ka furan gudaha, sidaas darteed waxay noqon kartaa booqasho xiiso leh. Waxaad ka arki kartaa waxa loogu yeero Room Marble oo ay ku xardhan yihiin sawirada dad muhiim ah taariikhda Welsh. Waa suurtagal inaan sidoo kale arki karno Qolka Golaha ama hoolka shirarka, qolalka lagu qurxiyay taxaddar weyn.
Matxafka Qaranka Cardiff
Dhismahani wuxuu ku dheggan yahay Xarunta Dawladda Hoose ee Cardiff, sidaa darteed waa la booqan karaa waqti-yar. Waa dhisme ka mid ah warshad neoclassical ah oo ku taal madxaf qaran. Waa madxaf aan ka helno bandhigyo kala duwan oo kala duwan, sidaa darteed badiyaa waa wax ku habboon in lala aado qoyska oo aan la qaadanno waqti madadaalo iyo waxbarasho leh. Waxaan ka heli karnaa bandhigyada sayniska dabiiciga ah ama cilmiga xoolaha ilaa shaqooyinka muhiimka ah ee qorayaasha sida Van Gogh ama Rodin. Waxa kale oo jira aag loogu talagalay carruurta, si ay ugu raaxaystaan ​​sayniska si firfircoon oo xiiso leh.
en el wadnaha Cardiff waxaan heleynaa Bute Park oo cajiib ah, Jardiinooyin magaalo qurux badan oo u dhow qalcadda oo ku fidsan webiga Taff. Meel ku habboon in lagu nasto oo lagu sameeyo jidadka kala duwan ee dhex mara, lug ama baaskiil. Barteeda waxaa ku yaal meel waxbarasho oo wax badan looga barto dhirta iyo xayawaanka baarkinka ku yaal.
Magaaladani waxay ahayd xarun Fiktooriya halkaas oo ganacsi badani ka jiray sababtoo ah kororka kacaankii Warshadaha. Maanta waxaan heli karnaa qolalka Fiktooriya ee wali shaqeeya iyo goobo ganacsi oo laga dukaameysto, oo hadda u janjeedha dhinaca dalxiiska. Laakiin Royal Arcade waa sawirka ugu da'da weyn kuwa magaalada jooga iyo midka qaab raaxo badan leh. Waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan uguna habboon meesha laga heli karo waxyaabo loogu talagalay qurxinta ama waxyaabaha quruxda badan ee caanka ah ee reer Welsh, sidaa darteed waxay noqon kartaa mid ka mid ah qodobbada ugu dambeeya ee booqashada si loo soo adeegto.
Suuqa Dhexe ee Cardiff Victoria
Haddii aad rabto wax dheeraad ah ka baro wales gastronomy magaalada gudaheeda waxaad ka aadi kartaa suuqa dhexe. Dhismaha qaab-dhismeedka Fiktooriya oo leh muraayad muraayad ah aad buu u qurux badan yahay dhexdoodana waxaan ka heli karnaa wax kasta oo laga bilaabo buugaagta gacanta labaad illaa nooc kasta oo cunto ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » nololeedka » Maxaa lagu arkaa magaalada Wales ee Cardiff
Hagaag qurux ah oo fudud oo maalintaada badbaadin doona
Sida loo daryeelo caafimaadka maqaarkaaga